200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Shabaab oo si yaab leh u abaal marisay haween dishay dagaalyahan ka mid ah oo kufsan rabay | Shabakada Warbaahinta Times
Shabaab oo si yaab leh u abaal marisay haween dishay dagaalyahan ka mid ah oo kufsan rabay
Nov 29, 2017 - jawaab
Nairobi (Caasimada Online) – Haween ka tirsan Soomaalida Kenya oo muddo ka tirsaneyd kooxda Al-Shabaab ayaa ka sheekeysay qiso yaab leh oo qabsatay intii ay kooxdaas la joogtay.
Sheekadan oo uu daabacay wargeyska Daily Maverick ee dalka South Afrika, ayaa gabadhan oo lagu magacaabo Khadiija waxa ku sheegtay in ayada oo 20 jir ah ay ka tagtay Gaarisa, una shaqo tagtay Mombasa, hase yeeshee halkaasi baabuur laga saaray lana geeyey xero tababar oo al-Shabaab ay ku leedahay Soomaaliya.
“Markii aan xerada tagay waxaan helay tababar diimeed iyo mid dagaal oo ku saabsan sida loo dagaal galo, loona fuliyo weerarada ismiidaaminta” ayay tiri.
Khadiija ayaa sidoo kale ka sheekeysay dhacdo isku day kufsi oo xerada Al-Shabaab ku qabsatay, hase yeeshee dhammaad yaab leh yeelatay.
“Markii aan xerada tagay waxaan ahaa bikro, waxaa kadib inuu i kufsado isku dayyey mid ka mid ah dagaalyahanada kooxda, waan la dagaalamay markii uu isku dayay inuu xoog igu soo galo, kadibna waan mindiyeeyey oo waa uu dhintay” ayay tiri.
Khadiija ayaa sheegtay in dhowr ilkood ay kaga dhaceen dagaalkaas, hase yeeshee dhacdadaas ay qabsatay dareenka dagaalyahanada kooxda, kadibna lagu abaal-mariyey in laga dhigo taliye, sababtuna ay tahay ayaga oo u sheegay inay tahay geesiyad.
Waxay sheegtay in wixii markaa ka dambeeyey ay hormuud u ahayd 40 haween oo badankood Kenyan ah.
Sheekadan oo English ah halkan ka aqriso